Ngomhla wamashumi amabini ananye ku-Matshi: uSuku lweSihobe seHlabathi | Uncwadi lwangoku
Namhlanje, ngoMatshi 21, Usuku lwemibongo lwamazwe ngamazwe kodwa uyazi ukuba yonke le nto yaqala njani? Ngaba uyazi ukuba ngaphambi kokuba isihobe kuphela sithathelwe ingqalelo njengolo lubhalo apho ukongeza ekubhalweni kwivesi, kukho isingqisho? Namhlanje singonwabela iindidi ezininzi zemibongo, kodwa njengakwezinye izinto ezininzi, bekungasoloko kunjalo.
1 Ukuhlahlela isihobe
1.1 Umlinganiselo weevesi
2 Kucetyiswa iincwadi zemibongo
3 Ukukhethwa kwemibongo emibini
Imibongo luncwadi kwivesi kwaye inothotho lweempawu olwahlula ngokukodwa kulwimi oluqhelekileyo noluthethwayo. Iimpawu zayo zezi zilandelayo:
La uyilo lwegraphic kunye nekhefu: Imibongo ibhalwe kuthotho lweeyunithi ezibizwa ngokuba ziivesi. Inye kwezi ndinyana ihlala ilayini ezimeleyo, kwaye ekupheleni kwendinyana nganye, kukho ikhefu ekufuneka yenziwe xa uyifunda
El ritmoUmculo udlala indima ebalulekileyo kwimibongo. Esi singqisho siza kusibiza. Le mvakalelo yomculo kwivesi isekwe kuphindaphindo lwezinto ezahlukeneyo ezenza imitha yemibongo. Ezona zibalulekileyo zezi: umlinganiselo weevesi, ukugxininisa kunye nemvano-siphelo.
Iimbongi zihlala ziqinisekisa ukuba imigca kwimibongo yazo inamalungu athile. Ukuphindaphindwa kwale nkqubo yesilabhili kudala ukwenziwa kwesingqi esithile esizisa umculo othile kwisicatshulwa xa sifundwa.
Ukuphindwaphindwa kwesivakalisi sesandi kwisigama esinye kwivesi nganye kukwavelisa isingqi. Akunyanzelekanga ukuba iphindwe kwivesi nganye ukuze umculo wenziwe.
Isimbo sibiza ukuphindaphinda kwezandi ekupheleni kweevesi ezimbini okanye ezingaphezulu. Ukuba le reitation ichaphazela zonke izandi ezivela kwisikhamiso sokugqibela esigxiniweyo, isingqisho iqela. Ukuba ichaphazela kuphela izikhamiso hayi amaqabane, isingqisho si Imvumelwano.
Kwelinye icala, ngoobani oonobumba ababekwe ecaleni kwendinyana nganye? Oonobumba babekwa xa siza kuhlalutya inkqubo yemetriki enombongo kwaye iya kubekwa kuphela kwiivesi ezinesingqisho. Unobumba unobumba omncinci xa ivesi inamalungu asi-8 ambalwa. Ke ngoko iya kubhalwa xa ine-9 okanye nangaphezulu. Kwezi vesi zingahambelani nemvano-siphelo kuya kubekwa umgca.
Uninzi lwemibongo yangoku inemvano-siphelo yasimahla kodwa ngaphambili yonke okanye phantse yonke imibongo ebibhalwe isingqisho kwezinye zeevesi zabo. Oku kongeze elinye inqanaba lobunzima kwindalo yoncwadi, kuba imbongi kuye kwafuneka ifumane amagama anemvano-siphelo aze ayilungelelanise nokwakheka kwayo.
Kucetyiswa iincwadi zemibongo
Ngosuku lweSihobe lweHlabathi sifuna ukuthatha ithuba lokucebisa ngezinye zeencwadi zemibongo onokuthi uzithande. Okwangoku, abaxatyiswanga njengeenoveli kunye neminye imibhalo yeprose, kodwa nokuba umgangatho wabo awuphantsi kwaye indalo yabo ayilulanga ...
Nayiphi na incwadi yemibongo onokufunda kuyo UMario Benedetti, uPablo Neruda, uBécquer, uJuan Ramón Jiménez, uFederico García Lorca, uCesar Vallejo, uGabriela Mistral o UJaime Gil de Biedma, Ziyacetyiswa kakhulu sithi. Zizinto zakudala ke kulungile ukulahleka ngaxa lithile ebomini.
"Uthando kunye nezothe" de Nkosazana Bebi: Ukuba umncinci kwaye uyayithanda imibongo, ungayithanda kakhulu le ncwadi. Ihlelwe nguhlelo lukaFrida kwaye inamaphepha angama-202. Izihloko ezinje ngobufazi, ulutsha, ucalucalulo, njl.
"Ibali elibuhlungu malunga nomzimba wakho ngaphezu kwam" de UMarwan: Yincwadi ethetha "ngemimandla echaphazelekayo" kunye "nemimandla yentlalo", umnqweno wokuphucula kunye nomnqweno wenyama, ubunzima bokuba nenyaniso nokuqonda phakathi kokubini, nangokongeza, ubulungisa boluntu obukude okulusizi. Incwadi ekucetyiswa kakhulu ukuba ufuna ukonwabela imibongo elungileyo kunye neyangoku.
"Ukuthula kwezilwanyana" de U-Unai VelascoUmbhali ufumene i Ibhaso leLizwe lemiBongo yaBaselula kwaye malunga naye, ijaji yathi oku kulandelayo: "Incwadi entsha, ebheja kwimibongo ebalulekileyo apho isigqebelo singangqinelani namanqaku e-avant-garde kunye nembekiselo eqinileyo yenkcubeko kunye noncwadi".
Ukukhethwa kwemibongo emibini
Kunzima ukubhala inqaku elibhalelwe uSuku lweSihobe lweHlabathi kwaye ungabhali imibongo ngamanye amaxesha enjalo. Ndikushiya nezimbini endizithandayo:
Ngaba kunokwenzeka ukuba andikwazi
usondele kum, ulahlekile kujonge?
Amehlo am ebebuhlungu kukulinda.
Ukuba kuvela ngoko
ilizwe lokwenyani ohlala kulo!
Yedwa, kamva, kumnyama kweza
(UJaime Gil de Biedma)
Badiliza iingxilimbela ezivela emahlathini ukuze zilale,
Bawa phantsi ngethuku njengentyatyambo,
ukwenza umntu kuphela onehlazo lomntu.
Ukwahlula ubukumkani ngobusuku obunye,
eziwisa amehlo, zibethe izandla njengezithixo
Kodwa olu thando luvaliwe ukuze lubone kuphela uhlobo lwalo,
ukumila kwawo phakathi kweenkungu ezibomvu,
ufuna ukunyanzelisa ubomi, njengokwindla enyuka kangaka
imilebe yabo inika ezinye iinkwenkwezi,
Apho amehlo am, la mehlo,
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Ngomhla wamashumi amabini ananye ku-Matshi: Usuku lweSihobe lweHlabathi
UHarry Hole. Iminyaka engama-20 kunye namapolisa akholwayo avela kuJo Nesbø. EKHETHEKILEYO
UBettý, uSylvia kunye noLaura. Abafazi abathathu ababulalayo ngamaxesha amathathu